Ukuba ngumama osemncinci akusona lula, kwaye xa iifakela iikhamera, umsebenzi uya kuba nzima nakakhulu. Amadoda nabasetyhini ababethe i-MTV franchise 'Umama osemncane' kufuneka bafunde ngendlela enzima ukuba udumo nolonwabo aluhlali rhoqo, kunye namalungu amaninzi 'Omama omntwana OG,' 'Umama osemncinci 2,' kwaye 'Umama osemncinci 3' akazifumani kwiinkathazo ezinkulu kwaye ukhubaza isikrini. Ukususela kwiingxaki zeziyobisi ukuya kubundlobongela basekhaya, idrama ibonakala ilandele ezi nkwenkwezi eziyinyani apho zihamba khona.
Amber omama osemtsha kunye nentombi kaLeah. MTV
Inkwenkwezi ye-'Im's Teen Mom 'ye-Amber Portwood uhambo lweTV uhambo luye lwaqala ukuqala. I-20-based yase-Indiana-into yokuqala yayinabalandeli bebamba iiparele zabo xa eqala ukushaya kwindawo '16 kunye noNqamle, 'umbulelo weminyaka emine phakathi kwakhe kunye noyise u-Gary Shirley, owayengumhlobo Umzalwana omdala ka-Amber. Izinto zathatha inguqu ephawulekayo kwiminyaka embalwa emva kokuzalwa kwentombi yabo, uLeah, xa u-Amber ehlasela uGary kwikhamera. Emva koko kwandula ukuhla kwehla kwavela inkokhelo yeziyobisi kunye neenyanga ezili-17 zentolongo. Nangona kunjalo, ukususela ekukhululweni kwakhe, u-Amber ubonakala ephendukele izinto-ufumene uthando kunye nomlingani uMat Baier kwaye uqalise iindlu ezintsha zokungena kweshishini.
Umama osemtsha u-Adam Lind. UAdam Joe Lind / Instagram
I-Chelsea Houska ingaziwa njengelinye lamalungu athembekileyo emhlabeni wonke, kodwa umntwana wakhe, u-Adam Lind, akunjalo. Emva kwemizamo embalwa yokwenza izinto zisebenzele ngenxa yentombi yabo, Inkululeko, idilesi iyahlukana, kunye no-Adam baya kuba nomnye umntwana, uPaislee, kunye nentombikazi uThart Halbur, ekugqibeleni wagqiba izinto, naye. Ukususela ngoko, u-Adam ubanjwe kwixesha elide kwizinto ezininzi ukususela kwintombi engaphambili ukuba angabonakali. Ngo-2015, uAdam wasinda ekufeni xa uCorvette ekhuphuke emlilweni emva kokuba eqhube kwelinye imoto, emva koko wabanjwa kwakhona ngokuqhuba ngokuqhuba ilayisensi.
Umama osemtsha 2 inkwenkwezi uJenelle Evans ubeka kwixesha lakhe lokuzalwa. Getty Images
Inkwenkwezi ye-'Imen's Teen '2' uJenelle Evans uye wayenebudlelwane obubi kangako njengoko ebenokubanjwa ngexesha lakhe kwibala. UJenelle wakhulelwa ngumlingane waza wavuma umxhaphazi u-Andrew Lewis xa wayesesesikolweni esiphakeme, kuphela ukuzitholela ukuphakamisa iJace kwangoko. Emva kokuhlukana kwabo, udibanisa umtya we-dudes ongaphantsi-onqwenelekayo, kubandakanywa nesigqirha esinobudlova e-Kieffer Delp, ukuphinda i-Courton Rogers (owatshatileyo), kunye no-Gary Head, owayengumhlobo wakhe emva kokulwa ngokomzimba. Ngethuba lakhe kwixesha lokubonisa, uJenelle ubanjwe ngenxa yezophulo-mthetho kuquka ukuhlaselwa, i-cyberstalking, ukuphula nokungena, ukuphulwa kwee-parole, i-drug possession, kunye nodlova lwasekhaya. Ekuqaleni kwakubonakala ngathi wayemthobile ukuphela kokuxhaswa kunye nomntwana wesibini nomntwana, uNathan Griffith, kodwa izinto zahamba ezantsi phakathi kwababini xa uJenelle ekhulelwe ngunyana wabo, uKaiser, kunye naba babini babanjwe ukuhlaselwa omnye omnye ukususela.
Inkwenkwe yenkwenkwezi uFarrah Abraham. Bruce Glikas / Getty Izithombe
Ibali likaFarrah likaMama 'omncinane' laqala ngombala onzima xa u-Derek Underwood, owayengumhle, ebulawe emotweni ngaphambi kokuzalwa kwentombi yabo, uSophia. Ukususela ngoko, ubomi bukaFarrah bube yintlambo yedrama, ukuqala ekhaya. Ubaba kaFarrah, uMichael Abraham, kuthiwa uboshwe emva kokusongela uDerek ngommese emva kokumbamba egumbini likaFarrah, ngoxa umama wakhe, uDebra Danielson, wabanjwa ngenxa yokuhlaselwa kukaFarrah ngo-2010. Ukususela ngoko, u-Farrah wahlawuliswa enetyala le-DUI, eneenkwenkwezi kwi-"tape yesondo" kunye neenkwenkwezi ezindala zefilimu uJames Deen, kwaye akazange ahlangane nomsindo wakhe kwiinkwenkwezi zakhe ze-MTV, abanye babo babesongela ukuyeka umboniso ukuba ubuyiswe kwi-'Myen Mom OG '.
Umama osemtsha 2 inkwenkwezi uNathan Griffith kunye noKaiser unyana. UNathan Griffith / Twitter
UNathan Griffith wayebonakala enjengomkhonto ekugubungeni izixhobo xa eqala ukukhupha uJenelle Evans kwiinyawo zakhe. I-muscular, ihloniphekile kwaye iqeshwe, indoda eyayisemkhosini yenze into ecacileyo kuJenelle, unyana wakhe uJace, nomama uBarbara, kodwa ukuzonwabisa kwabo kwakunokufutshane. Ekubeni lo mbhangqwana waqala ukutshata ngo-2013, uNathan uboshwe ngenxa yobundlobongela basekhaya, i-larceny, uye waxoshwa kuye, ivakaliswe ukuba ibandakanyeke ekumangalelweni komntwana kunye noJenelle, kwaye ichithe ixesha ejele emva kokufumana i-DUI yesithathu . Nangona ukutyunjwa kwakhe okubonakala kungekhona ukuyeka ukumisa iinkqubo zomthetho kunye nezobulungisa, uNathan uye wafumana ixesha lokufumanisa ukubiza kwakhe okwenyaniso: ukwakha umzimba.
Umama osemtsha 2 inkwenkwezi uLeah Messer. Paul Archuleta / FilmMagic
Ibali likaLeah Messer leenkwenkwezi liye liye laqala ukukhwela, xa ekhulelwe ngamawele emva komtshato omfutshane kunye noCorey Simms. Emva kokuba uLeya azale iintombi uAleah no-Aliannah, yena kunye noCorey babopha iqhina, kodwa imanyano yabo yayifutshane, ngenxa yokuvuma kwakhe ukuba wayemkhohlise kwiveki ngaphambi kokuba ahambe phantsi. Emva koko uLeya watshata noJeremy Calvert, kunye nentombi yakhe u-Adalynn. Isiqabane esahlukana nomtshato emva kokuxhomekeka kweziyobisi, imicimbi yengqondo yengqondo kunye nobuhlobo obude buye bangela umtshato wabo.
Umama osemtsha 3 inkwenkwezi uJoey Maes. Marissa Cintron / Instagram
'Umama osemncinane 3' unokuphela nje ngexesha elilodwa, kodwa oko kwakungekho ixesha elaneleyo lokubonakalisa enye yeekhetshana 'zamabali amanqaku amaninzi kunomhla. Umbhangqwana wase-Wyoming uKathy Yeager noJoey Maes baqale babonakala benobambiswano onothando ngexesha labo "16 kunye noBunqunu," kodwa ukuqhekeka kobudlelwane babo baqala ukubonakalisa kungekudala emva kokuba iikhamera ze-Teen Mom 'zibonise. Emva kokuchitha ubusuku basebenzayo kwimayini yamalahle, uJoey waya ekhaya edinwe, enomsindo, kwaye enqwenela ukuphazamiseka kwakhe ngoK Katie, owathi waxhatshazwa ngaphambi kokugqibela wamshiya enye intombazana. Ukususela ngexesha lakhe elifutshane ekukhanyeni, uJeyey uye wazala abanye abantwana ababini nabanye abafazi ababini.
I-Pencil Erasers isebenza njani?
Kuphi Ukufumana Uluhlu LwezemiDlalo yePing Pong yeNgingqi